Akụkọ - Ahịa ọla ọla, asọmpi dị n’etiti teknụzụ na ịhụnanya
Mkpụrụ diamond mepụtara nke ọma dị ka afọ ndị 1950. Otú ọ dị, ruo n'oge na-adịbeghị anya, nrụpụta nrụpụta nke ịkọ diamonds amalitere dị obere karịa ụgwọ nke diamonds a na-egwupụta.
Ọganihu sayensị na teknụzụ kachasị ọhụrụ emeela ka ọnụ ahịa nrụpụta nke diamonds mepụtara belata. Ke ofụri ofụri, ndị na-eri nke ịzụlite diamonds bụ 30% na 40% ala karịa ndị na-eri nke na Ngwuputa diamonds. Asọmpi a, onye ga-abụ onye mmeri n'ikpeazụ? Ọ bụ diamond na-egwupụta akụ nke emere site na ala, ka ọ bụ ịkụ mkpụrụ nke dayamọnd nke teknụzụ mepụtara?
Laboratorylọ nyocha na-akọ diamonds na mineral diamond nwere otu anụ ahụ, kemịkalụ, na ngwa anya na-ahụ otu ihe ahụ dịka diamonds. N'ime oke okpomọkụ na gburugburu nrụgide dị elu, ụlọ ọrụ na-etolite diamond iji imitateomie usoro nke diamonds na-egwupụta akụ, na-eto site na obere mkpụrụ osisi diamond n'ime nnukwu diamonds. Ọ na-ewe naanị izu ole na ole iji mepụta diamond n'ime ụlọ nyocha. Ọ bụ ezie na oge a na-egwupụta ọla kọpa dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu, oge ọ were iji kpụọ dayamọnd ndị dị n'okpuru ala malitere kemgbe ọtụtụ narị afọ.
Ugbo nke diamonds ka di na nwata n'ahia ahia ahia.
Dabere na akụkọ nke Morgan Stanley Investment Company, siri ike ahịa nke laabu-mepụtara diamonds malite si 75 nde na 220 nde US dollar, nke bụ naanị 1% nke zuru ụwa ọnụ ahịa nke diamond roughs. Otú ọ dị, site na 2020, Morgan Stanley na-atụ anya na ahịa ndị a na-emepụta diamond nwere nyocha maka 15% nke ahịa maka obere ola diamond (0.18 ma ọ bụ obere) na 7.5% maka nnukwu diamonds (0.18-carats na n'elu).
Mmepụta nke dayamọnd ndị a zụlitere pere oke mpe ugbu a. Dabere na data si Frost & Sullivan Consulting, mmepụta nke diamonds na 2014 bụ naanị 360,000 carats, ebe mmepụta nke mined diamonds bụ 126 nde carats. Firmlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-atụ anya na ndị na-azụ ahịa na-achọ ihe bara uru ga-abawanye uru ga-akwalite mmepụta nke ola diamond zoro na 20 nde na 2018, yana 2026 ọ ga-abawanye ruo nde 20 carats.
CARAXY Diamond Technology bụ onye ọsụ ụzọ na ahịa ụlọ maka ịkọ diamonds ma bụrụkwa onye mbụ so na IGDA (International Association for the Cultivation of Diamonds) na-azụ ahịa na China. Mr. Guo Sheng, CEO nke ụlọ ọrụ, na-enwe nchekwube banyere ọdịnihu ahịa mmepe nke diamond cultivation.
Kemgbe mmalite azụmahịa na 2015, ahịa CARAXY nke ụlọ nyocha mepụtara atọ atọ na ahịa kwa afọ.
CARAXY nwere ike ịzụlite ọla ọcha na-acha ọcha, odo odo, acha anụnụ anụnụ na pink pink. Ka ọ dị ugbu a, CARAXY na-agba mbọ ịkọba diamonds na-acha akwụkwọ ndụ na odo odo. Otutu diamonds lab na ndi China kariri 0.1 carat, ma CARAXY na-ere ola diamond nke nwere ike iru carats 5 nke ocha, odo, acha anụnụ anụnụ na 2-carat diamonds.
Guo Sheng kwenyere na ihe ịga nke ọma na teknụzụ nwere ike imebi oke oke oke na agba, ka ịbelata ọnụahịa diamond, ka ọtụtụ ndị ahịa wee nwee ọmarịcha amara.
Asọmpi dị n'etiti mmekọrịta ịhụnanya na teknụzụ na-esiwanye ike. Ndị na-ere nkume ndị dị oké ọnụ ahịa na-anọgide na-eme mkpesa nye ndị na-eri ihe na nrigbu nke dayamọnd ahụ emebiwo gburugburu ebe obibi, tinyere ụkpụrụ omume metụtara “dayamọnd ọbara.”
Diamond Foundry, otu ụlọ ọrụ diamond malitere na United States, na-azọrọ na ngwaahịa ya “bụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi dị ka ụkpụrụ omume unu.” Leonardo DiCaprio (Little Plum), onye pụtara na 2006 ihe nkiri Blood Diamonds, bụ otu n'ime ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ ahụ.
Na 2015, ụlọ ọrụ asaa kachasị ukwuu na-egwupụta diamond na ụwa guzobere DPA (Association of Diamond Manufacturers). N’afọ 2016, ha bidoro mgbasa ozi akpọrọ “Real is rare. Obere bụ dayamọnd. ”
Onye na-egwuputa egwu egwu nke De Beers na-akọ maka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ahịa zuru ụwa ọnụ, onye ukwu ahụ na-enweghị nchekwube banyere diamonds ahụ. Jonathan Kendall, etieibuot De Beers International Diamond Grading and Research Institute, kwuru, sị: “Anyị mere nnyocha sara mbara banyere ndị ahịa gburugburu ụwa ma anyị ahụghị na ndị na-azụ ahịa na-achọ dayamọnd sịntetik. Ha choro ola diamond. . ”
”Ọ bụrụ na m nye gị ya sịntetik sịntetik wee sị 'Ahụrụ m gị n'anya', a gaghị emetụ gị aka. Daimọn sịntetik dị ọnụ ala, na-ewe iwe, enweghị ike igosipụta mmetụta ọ bụla, ọ nweghị ike ịkọwa na m hụrụ gị n'anya. ” Kendall gbakwunyere okporo ụzọ.
Nicolas Bos, onye isi oche na onye isi oche ọla French bụ Van Cleef & Arpels, kwuru na mmepụta nke Van Cleef & Arpels agaghị eji dayamọnd sịntetik rụọ ọrụ. Nicolas Bos kwuru na ọdịnala Van Cleef & Arpels bụ iji naanị akụ dị egwu, na ụkpụrụ “dị oke ọnụ ahịa” nke ndị otu na-azụ ahịa na-akwado abụghị ihe laabu na-akọ diamonds.
Onye banki a na-amaghị aha nke ụlọ akụ akụ na esenidụt na-elekọta ụlọ ọrụ njikọ na nnweta kwuru na N'ajụjụ ọnụ China Daily na na-aga n'ihu mgbanwe nke oriri ndị mmadụ echiche na nwayọọ nwayọọ ọnwụ nke "diamond si na-adịgide adịgide" amara, artificially zụlite diamonds The ahịa òkè ga- gaa n'ihu na-ebili. Ebe ọ bụ na diamonds na-arụ ọrụ na -emepụta ihe na ihe ndị sitere n'okike ndị a na-ahụ anya, ndị ahịa na-adọrọ mmasị site na ọnụ ahịa dị ọnụ ala nke diamonds akọpụtara.
Otú ọ dị, na onye oru banki na-ekwere na nrigbu nke diamonds nwere ike ịbụ ihe kwesịrị ekwesị n'ihi na ego, n'ihi na usen usen Ngwuputa diamonds ga-eme ka ha ahịa ịrị elu nọgidere. Nkume ndị nnukwu carat na diamond dị oke ụkọ na-aghọ obi ndị bara ọgaranya ma nwee nnukwu ego itinye ego. Ọ na-ekwere na ụlọ nyocha ịkụ mkpụrụ nke diamonds bụ ihe mgbakwunye na ahịa ndị ahịa.
Nnyocha na-eme atụmatụ na mmepụta nke diamonds a na-egwupụta egwu ga-elu na 2018 ma ọ bụ 2019, emesịa mmepụta ga-eji nwayọ belata.
Kendall na-azọrọ na ọkọnọ De Beers nwekwara ike ịkwado "iri afọ ole na ole", na ọ na-esiri m ike ịchọta nnukwu diamond dị egwu.
Guo Sheng kwenyere na n'ihi mkpali mmetụta uche nke ndị na-azụ ahịa, ahịa mgbanaka agbamakwụkwọ bụ ihe ịma aka maka ụlọ nyocha iji zụlite diamonds, mana dịka ejiji ọla na onyinye ọla kwa ụbọchị, ahịa nke diamonds a rụpụtara amụbaala n'ike n'ike.
Ọ bụrụ na a na-ere nkume ndị dara okike na nkume dị egwu na nkume dị egwu, oke ọkụ ahịa na-arị elu nke nkume dị egwu bụkwa ihe iyi egwu nye ndị na-azụ ahịa.
De Beers tinyere ego buru ibu na teknụzụ nyocha diamond. Ya ọhụrụ obere diamond nnyocha ngwá ọrụ, AMS2, ga-abụ nke a June. Onye bu ụzọ nke AMS2 enweghị ike ịchọpụta diamonds erughị 0.01 carat, na AMS2 mere ka o kwe omume ịchọpụta ola diamond pere mpe dị ka mkpokọta 0.003 carats.
Iji mata ọdịiche dị n'etiti dayamọnd ndị na-egwupụta akụ, ngwaahịa ndị a na-akpọ CARAXY niile bụ ndị akpọrọ laabu. Ma Kendall na Guo Sheng kwenyere na ọ dị mkpa iji kpuchido ma bulie nkwenye ndị ahịa n'ahịa ka ndị na-azụ ọla wee mara ụdị diamonds ha na-azụ na oke ọnụ.
Post oge: Jul-02-2018